Ungaba njani uMphathi weNkqubo yeMobile | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 28, 2012 UAdam Omncinci
Bendihlala ndicinga ukuba usetyenziso lwesikhangeli seselfowuni luya kugqitha ii -apps zeselfowuni- kakhulu njengezicelo ze-SaaS ziye zafumana isoftware yedesktop. Nangona kunjalo, ngemicimbi yabucala, i-geolocation, ukuswayipha kunye nezinye izinto ezineselfowuni… kujongeka ngathi usetyenziso lweselfowuni lulapha ukuze luhlale. Le infographic evela Izikolo.com ichaza imfuno kunye nenkqubo iqela lakho elinokuyithatha ukuze ibe ngabaphuhlisi beapps.
UGartner uqikelela ukuba ngo-2015 Iiprojekthi zophuhliso lwee-mobile ziya kudlula iiprojekthi zesicelo sePC Ngu-4 kuye ku-1. UDice.com uxele a Ukunyuka kwepesenti ye-100 yokuthunyelwa kwemisebenzi yabaphuhlisi besoftware phakathi kwe-2010 kunye ne-2011.
tags: kwi-infographicAbaphuhlisi beappsizicelo zeselulaapps mobile